Semalt: Mirai (DDoS) Source Code Uye Nzira Yokudzivirira Nayo
Mushure mekugadzirwa kwekodhi yakashandiswa kuita shanho huru paIndaneti, Artem Abgarian, The Semalt Mutevedzeri Mukuru weMutengi weMutengi, anotenda kuti isu tiri panotangira mafashamo emamwe maitirwo eInternet. Vagadziri vekodhi vakagadzirwaiyo kuisa zvishandiso zvisina kudzivirirwa zvakabatana. Izvozvo zvinosanganisira makamera, routers, mafoni uye mamwe maikironi asingashandisi. Iko code inogadzirisaivo uye vanozvishandura kuva "auto bots", izvo zvino zvichitsvaga mawebhusayithi nechinangwa chekugogodza ivo pasina - lima excursions.
Vavhudzi vekuchengetedzwa kwepaIndaneti vanodana ikhodi "Mirai". Yakanga iri shure kwekurwisa kunoshamisavanochengeteka mablogiki webusaiti yeKrebs On Security. Brian Krebs ndiye nyanzvi yezvokuchengetedza uye veteran blogger. Akasimbisa bhuku reiyo code yakabuda muhurukuro yevadhaki vhiki rakapera.
Mune rimwe remashoko ake, Krebs akanyevera nezvekuwedzera kwekurwiswa paIndanetiZvinhu (IoT) zvishandiso. Vatengesi, vanoita zvekurwisa uku vanoshandisa izvi zvigadzirwa kuti vape mabhidhiyo nezvikumbiro, kuvaka chikwata chakakwanakuwandisa mavharivha. Nekushaya kukwanisa kupa vese vashanyi vavo nezvinhu zvavanoda, webhusaiti inovhara pakupedzisira.
VaHackers vakamboshandisa DDoS kurwisa munguva yakapfuura kugogodza mawebsite. TheUK ndiyo nyika yechipiri inonyanya kutariswa pashure peUnited States. 'DDoS kushorwa kunotsanangurwa nemichina, mashuva kana mawebsite. Ivo inhepfenyuro kana mhando ye "botnets" iyo inoshanda pamwe chete kuti iite zvikumbiro zvisiri nyore pawebsite..Vanokumbira ruzivo panguva imwechete uyerinoputika kusvika pakukwira kwayo uye rinenge risingakwanisi kushanda.
Kana muchengeti anogona kusimudza chipinja chinotambudza chinobatanidza neIndaneti.Vanogona kubatanidza urombo uhwu kuva varanda kuti vataure nekati central server. Asingazivi kumushandisi, achiita kurwisakushandisa aya majaira kunowedzera huwandu hwahwo zvikuru.
MuKrebs nyaya, DDoS kurwisa kwakaita kuti Krebs paIndaneti yeHurumende ichengetedzweye 620 gigabytes yedheta neyechipiri. Icho chinopfuura zvinopfuura motokari kutora pasi mawebsite akawanda ikozvino.
Brian Krebs, muridzi wacho, akanyora kuti Mirai malware inopararira kune avo vanotamburazvishandiso nokukambaira internet paitsvaga maIoT maidikiti akachengetedzwa nemaitiro ezvigadzirwa zvemafekitari, kana mabhii akashandiswa-coded nemasipiwedi.
Mhemberero uye muridzi wekodhi yacho haigoni kuzivikanwa. Zvisinei, munhu uyoakaita chirevo chekushandisa chakashandiswa zita remutauro "Anna-senpai". Vaiti vave vachiunganidza uye vakawana kutonga kwezviuru zvezvigadzirwa sehurumende yavo.Mukutaura kwepaIndaneti, weHacker akataura kuti zviyero zvinyorwa zvakatorwa newebsite kuti zvichenese mabasa avo zvakagadzira dent inkubudirira kwemarware. Kunyange zvakadaro, kodeti inoenderera mberi nekuchera maitiro akawanda kwazvo.
Nemhaka ye Mirai malware, mamiriyoni ezvinoshandiswa zvisingatauriki zvakabatana zvakamiravanotambudzwa kumanikidziro ekumanikidzwa nevanokuvadza uye vakashandurwa kuva botnets kuti vatarise mawebhusayithi. Mukukurukurirana naMareOnline, Tony Anscombe weAvastSangano rekuchengeteka rakati zvipfeko zvose zvinoshanda sevangakwanise kuwana mazano kune vanokuvadza. Inotanga kusava nehanya nenzira iyo vadziki uyevashandi vanochengetedza aya majaira.
Imwe yenzira dzakanakisisa dzinoshandiswa nevashandi vanogona kuchengetedza zvishandiso zvavo kuchengetedza zvigadzirwa zvavoup-to-date uye ugare uri kutarisira chero kusunungurwa kunoitwa nevakagadziri. Chechipiri, gwaro rakachengeteka muzvinyorwa nezita rekushandisa uye password, zvakasiyanakubva pazvigadziriswa zvigadziriro ndiyo nzira yakanaka yekuchengetedza aya majeri akachengeteka. Pakupedzisira, vashandisi vanofanira kushandisa chero chekuchengetedzwa kwezvigadzirwa, zvinoshanda kune achigadzirwa, icho chinogona kubatsira kudzivirira kutambudzwa.